Chigaro cheWiricheya Mabhanhire - Seat Seat Strap Accessories | Karman Healthcare
Isu tinopa akawanda akasiyana marudzi e wiricheya mabhandi epachigaro anokwana mawoko mazhinji mavhiripu. Mabhanhire edu echigaro anoenderana neanopfuura zana mavhiripu iyo yatinopa. Chinhu chakanyanya kukosha che wiricheya mabhandi echigaro ndeyekuti zvinodzivirira mushandisi kuti arege kutsvedza kana kudonha pachigaro.
SB22 ibhandi rese rechitema dema, machira ekumisikidza kuita furemu uye ine bhatani rebhuruu yekusunungura.
SB88 ndezvekufambisa Chairs CHETE, dzese dzakasviba, uye iyo tambo inoputira yakatenderedza chigaro.
SB99 ndeye Scooter uye Simba mavhiripu CHETE nebhatani rekuburitsa bhatani.
SB99-48 yakagadzirirwa mavhiripu uye ine bhatani rekuburitsa tsvuku.
Clip kana Buckle Seat Mabhandi - Maitiro e wiricheya Mabheti
Mamwe emabhanhire edu echigaro ane "Clip" dhizaini bharandi iyo ine hono yechikadzi neyechirume. Rudzi rwechigaro chebhanhire chakafanana nereye bhegi rekukiya tambo uye iri nyore kushandisa. Rumwe rudzi rwechigaro chebhandi chatinacho ndirwo rudzi rwunoita kunge bhandi remotokari. Bhatani tsvuku rinozivikanwa rinodzvanya mukati nekunze kwenzvimbo kubvumira mushandisi kuti arisunge mukati uye kuti ave akachengeteka panguva yerwendo rwavo.
simba wiricheya mabhandi epachigaro anowanikwawo kubva kuKarman Healthcare, aya mabhandi echigaro anoshandiswa pabhatiri rinofambiswa mavhiripu. Musiyano uripo pakati pesimba cheya chigaro chebhandi ne wiricheya yemawoko bhandi rechigaro ndiyo inowanzova simba wiricheya bhandi rechigaro rakareba kubvumira bhanhire kuti risunge mukati mativi ese echigaro.
wiricheya Kuchengetedza Belt
Kune akawanda marudzi akasiyana e wiricheya mabhandi ekuchengetedza. Bhandi rekuchinjisa rakafanana mukunzwa kune iyo wiricheya bhandi rechigaro, asi rinoshandiswa zvakasiyana. Bhandi rekuchinjisa rinoshandiswa kubatsira muchengeti mukubatsira mushandisi kuendesa mukati kana kunze kwechigaro chavo. Bhandi rekuchinjisa rinoshanda senge rutsigiro system kubvumidza mutarisiri kuti akwanise kutakura zvakachengeteka huremu hwemushandisi vasina kuzvikuvadza ivo nemushandisi.
Kana iwe ukasawana mhando yebhandi repachigaro iwe yauri kutsvaga, ndokumbira utipe runhare kana e-mail isu kuti titaure nemumiriri webasa revatengi anogona kukubatsira iwe kuwana rakakodzera chigaro chechigaro chako wiricheya.
45 “Yakareba, 2” Webbing.
Chimwe-Piece Chigaro Bhandi.
60 "Yakareba, 2" Kubata.
Chigaro Bhandi cheSimba wiricheya Push Button, auto maitiro.
60 "refu, 2" webbing
Chigaro Bhandi che wiricheya yemawoko Push Button, Auto maitiro
48 "refu, 2" webbing
Mabhanhire echigaro UPC #